ဘာသာရေး စော်ကားသူကို ရဲကဖမ်းပြီး မိတ္တီလာ ကနေမန္တလေးကိုလွှဲ
ဘာသာရေး စော်ကားသူကို ရဲကဖမ်းပြီး မိတ္တီလာ ကနေမန္တလ...
20 พ.ค. 2563 - 00:59 น.
ဗုဒ္ဓ ဘာသာ သံဃာတော်တွေကို ပြင်းပြင်းထန်ပုတ်ခတ်ရေးသားခဲ့သူရဲ့ မိတ္တီလာမှာ လာပြီးတောင်းပန် ဖြေရှင်းတဲ့ပွဲဟာ လူအုပ်ကို မထိန်းနိုင်ဖြစ်ပြီး ရဲက အဲဒီလူကို ဖမ်းပြီးခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ လည်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသန်းက က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လည်း ဒေသခံအချို့က ရဲစခန်းထိ လိုက်လာတဲ့အတွက် အခုအခါမှာ မန္တလေးမြို့ကို လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီး သာသနာညှိုးနွမ်းစေမူ့နဲ့အမူ့ဖွင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို သိရှိထားကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှဝ် ဦးစိုးသန်းက ပြောပါတယ်။
အခြေခံပညာ ဒသမတန်း သင်ရိုးသစ်မှာပါတဲ့ Sex Education အကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး လူမူကွန်ယက်မှာဝေဖန်ရင်း သူက ဗုဒ္ဓ သာသာ သံဃာတော် ကိုဆဲဆိုခဲ့သလို အလုပ်မလုပ်သူတွေလို့လည်းဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
မိတ္တီလာမြို့က ဆရာတော်တွေက တော့ လူကိုယ်တိုင်လာ တောင်းပန်ပေမယ့် မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေ ထပ်မဖြစ်ရေးအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ ပဲရှင်းဖို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ပုတ်ခတ်ရေးသားခဲ့သူဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ ရှင်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မိတ္တီလာမြို့ သံဃာ့နာယက ရုံးခန်းမှာ မေလ၁၉ရက်နေ့က ရှင်းနေကြရင်း အပြင်ဘက် ကလူအုပ်ကများလာတဲ့ အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က သူ့ကို ကားနဲ့ ခေါ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ မိတ္တီလာ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
SexEducation အကြောင်းလူမူကွန်ယက်မှာရေးသားရင်း သံဃာတော်တွေကို ပုတ်ခတ်ရေးသားခဲ့သူဟာ မိတ္တီလာ မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၊အခု ရန်ကုန်မြို့ မှာနေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း သူ့မိဘတွေ ကတော့ မိတ္တီလာမှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းမိတ္တီလာမြို့ခံ ကိုကျော်စိုးမိုးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မိတ္တီလာမြို့ခံတွေဟာ သူ့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ကဘုန်းကြီးကျောင်းကနေ ခေါ်ထုတ်သွားစဥ် မှာစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြပြီးတော့ ရဲကားကို လည်း ခဲတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်း ကိုကျော်စိုးမိုးကပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေကတည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဗုဒ္ဓ ဘာသာ သံဃာတော်တွေကို သူက ဝေဖန်ဆဲဆိုတိုက် ခိုက်ရေးသားနေတဲ့အတွက် မြို့မိမြို့ဖနဲ့ ဗုဒ္ဓ သာသာသံဃာတော်တွေက သံဃာမဟာနာယက နဲ့ သာသနာရေးကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မေလ ၁၉ ရက်မှာ လူစုလူဝေးတွေဖြစ်
Kyaw Win Thant အကောင့်ပိုင်ရှင် ဟာ ဒသမတန်း သင်ရိုးပါ Sex Education အကြောင်း ဝေဖန်ပြောကြားရင်း မိတ္တီလာမြို့ နဂါးရုံကျောင်းတိုက်က ကိုယ်တော်တွေဟာ မြို့လယ်က ဗီဒီ ယိုရုံမှာ လာကြည့်ကြတဲ့ အကြောင်း ၊ဘောပွဲလောင်းတဲ့အကြောင်း၊ လူတွေလုပ်တဲ့ အတိုင်း အကုန်လုပ်ပြီး၊ ကိုယ်တော်တွေက အလုပ်မလုပ်ကြကြောင်း စတာတွေကို ရေးသားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါအပြင် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် က အစ ကိုရင်တွေထိ အားလုံးကို လည်း ဆဲဆို ရေးတာလည်း တွေ့ရတယ်လို့ မိတ္တီလာမြို့ ခံတွေကပြောပါတယ်။
သူဟာ ဗုဒ္ဓ သာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အခုလို ရေးသားမိတာတွေဟာ အရက်မူးနေတဲ့ အချိန်မှာရေး မိတာဖြစ်တယ်လို့ လည်း ဖြေရှင်းတာတွေရှိတယ်လို့လည်း မိတ္တီလာမြို့ သတင်းထောက်တစ်ဦး ကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီKyaw Win Thant အကောင့်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေ ကတည်း ကစပြီးသံဃာတော်တွေကိုဝေဖန်တဲ့ စားသားတွေဆက်တိုက်ရေးသားခဲ့တာ လို့လည်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသန်းက က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မေလ ၁၈ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက Kyaw Win Thant ဖေစ်ဘုတ် အကောင်ပိုင်ရှင်မိဘတွေက မိတ္တီလာမြို့နယ် သံဃာ့နာယက ဆရာတော်ထံ လာရောက်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် တောင်းပန်ဖို့ သံဃာအချို့ နဲ့မြို့ခံအချို ကတောင်းဆိုတဲ့ အတွက် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် တောင်းပန်ဖို့ မေလ၁၉ ရက် နေ့ မနက် သံဃာ့ နာယက ဥက္ကဋ္ဌ ကျောင်းဖြစ်တဲ့ ကိုးနဝင်းကျောင်း ကိုလာရောက်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသန်းက က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မိတ္တီလာမြို့တောင်းပန်ပွဲမှာ လူစုလူဝေး ဖြစ်လာရတာဟာ မေလ ၁၉ ရက်နေ့ မှာKyaw Win Thant ဖေစ်ဘွတ်အကောင်ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင်လာတောင်းပန် ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကို လူမှုကွန်ယက် မှာ ဖြန့်ချီခဲ့ ကြတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်း မိတ္တီလာမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။
သံဃာတော်တွေကတော့ ဥပဒေကြောင်းအရ ဖြေ ရှင်းတာဟာ ရေးသားတဲ့ သူနဲ့ မိတ္တီလာမြို့က မိဘတွေအတွက် လုံခြုံရေးအတွက်ပါ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆပြီး ဥပဒေကြောင်းအရရေးယူပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကာ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကလဲ ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ရဲစခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွား ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းဒေသခံအချို့ကရဲစခန်းထိလိုက်လာတဲ့အတွက် Kyaw Win Thant အကောင့်ပိုင်ရှှုင်ကို မန္တလေးမြို့ကိုလွဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီး သာသနာညှိုးနွမ်းစေမူ့နဲ့အမူ့ဖွင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို သိရှိထားကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှဝ် ဦးစိုးသန်းက ပြောပါတယ်။ သာသနာညှိုးနွမ်းစေမူ့ ပုဒ်မ ၂၉၅ (က) ကတော့ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်အထိ ကျခံနိုင်ပြီးထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ဒဏ် နှစ် ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး အာမခံမပေးသော ပုဒ်မဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဘာသာရေး စော်ကားသူကို ရဲကဖမ်းပြီး မိတ္တီလာ ကနေမန္တလေးကိုလွှဲ